Chromecast ho an'ny Windows 10 - Ahoana ny fomba fampidinana sy fananganana - Ahoana No
Chromecast ho an'ny Windows 10 - Misintona & manangana (Torolàlana)
Chromecast dia fitaovana fampandehanana malaza nataon'i Google. Mahafinaritra antsika rehetra ny mandefa atiny amin'ny fahita lavitra. Ny Chromecast dia manamora ny fijerena fandaharana vaovao tsy misy ezaka. Betsaka ny olona manana ny solosainy ho an'ny streaming mora foana. Afaka mandefa votoaty mora foana avy amin'ny PC mankany amin'ny fitaovana Chromecast izao ny mpampiasa. Izy io dia sehatra mora ampiasaina amin'ny fialamboly mahafinaritra. Amin'ity toro-lalana ity dia hasehontsika ny fomba handefasana mora foana ireo horonantsary tianao indrindra, sary ary maro hafa avy amin'ny Windows PC.
Boaty mivantana PC marobe manokana dia tsy ho ela intsony. Raha efa manana Chromecast ianao dia zahao ny tari-dalan'ny manam-pahaizana anay.
Mametraha Chromecast amin'ny Windows - Torolàlana
Tsotra ihany ny fizotran'ny fametrahana Chromecast. Fomba mahafinaritra ity hijerena maimaimpoana ny atiny rehetra. Na iza na iza dia afaka mizaha ity fitaovana ity amin'ny alàlan'ny solo-sain'izy ireo. Tena sarotra ny dingana, ary afaka manaraka azy ny olona rehetra. Izy io dia miasa amin'ny sehatra rehetra, ao anatin'izany ny fitaovana Windows 10. Ity ny torolàlana fananganana manam-pahaizana ho an'ireo mpampiasa windows rehetra. Andramo anio mba hampihenana ny enta-mavesanao amin'ny fandoavam-bola amin'ny serivisy.
Ny dingana voalohany dia mahitsy. Ireo mpampiasa vaovao dia tsy maintsy manao ny torolàlana fananganana Chromecast voalohany.Azonao atao ny mampandeha azy amin'ny fitaovanao fahitalavitra. Ny mpampiasa dia mila manisy ny extension HDMI kely eo anilan'ny fahitalavitra. Ampifandraiso amin'ny loharanom-pahefana ny Chromecast. Hanampy anao hampiakatra sy hampandeha ilay fitaovana io. Ankehitriny dia vonona ny handefa atiny avy amin'ny fitaovana rehetra eny amin'ny manodidina.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa internet dia efa manana google chrome amin'ny solosainy. Olona tsy fahita firy no mampiasa ny Microsoft's Edge, toa ahy. Ho an'ireo mpampiasa toy izany dia mamporisika anao izahay hampidina ny browser Google Chrome. Fepetra takiana amin'ny fampandehanana ny fisehoan'ny casting avy amin'ny PC-nao. Mifandray tsara amin'ny rindrambaiko Google ny fitaovana Google.
Ireo mpampiasa Chromecast vaovao dia afaka manangana ny fitaovany amin'ny alàlan'ny solosaina Windows 10. Tsy misy ezaka izany ary tsy mila ezaka be.Tsy maintsy mitsidika ny rohy manaraka . Hitondra anao amin'ny pejy fananganana fitaovana ianao. Eto ianao dia afaka mahita ny mailaka hananganana ny Chromecast amin'ny PC. Dingana mahitsy izy io. Tsindrio ny 'Set up your Chromecast' using this PC button.
Mila mifandray amin'ny tambajotra WiFi iray ihany ny Chromecast anao. Ity dia fomba mora azo antoka hahazoana manangana ny fitaovanao eo noho eo. Ny mpampiasa dia tokony ho eo amin'ny toerana tsy misy tariby. Io no fepetra takiana ilaina amin'ny fandefasana fitaovana Chromecast. Tsy mila be loatra ny fantsom-pifandraisana Interneto.
Manantena izahay fa ilay mpitarika dia afaka nanadio ny fisalasalanao momba ny fizotran'ny fananganana. Mahitsy ny manaraka na iza na iza. Manomboa mivezivezy amin'ny fahitalavitrao mora amin'ny alàlan'ity fomba ity. Amporisihinay an'izay rehetra mankafy atiny maimaimpoana amin'ny Internet. Izy io dia mety amin'ny streaming mivantana.
Ahoana ny fomba handefasana amin'ny Windows Device?
Ireo mpampiasa Windows 10 dia afaka mandefa amin'ny Google Chromecast amin'ny alàlan'ny chrome browser.Ity dia fomba tsotra sy mahomby amin'ny fampiasanao. Manoro hevitra anao izahay hanandrana azy anio. Ireto ny dingana.
Azonao atao ny manomboka amin'ny fitsidihana tranonkala iray misy atiny video na sary. Toerana midadasika ny Internet, ary afaka mahita seho, sarimihetsika ary sary marobe azo zaraina ianao. Tsara kokoa ny mijery ny atiny amin'ny efijery lehibe. Ho an'ity mpitari-dalana ity dia mitsidika horonantsary kisendrasendra ao amin'ny Youtube izahay.
Mba handefasana ny atiny eo amin'ny efijery tranokalanao dia mila tsindrio havanana eo amin'ny lampihazo ianao. Tsotra izy io ary tena mandaitra. Azonao atao ny mahita avy hatrany ny safidin'ny mpilalao. Tsindrio ny bokotra cast ary zarao mora foana amin'ny fitaovana Chromecast anao. Izy io dia mety indrindra ho an'izay mijery seho maro, sarimihetsika amin'ny solosain'izy ireo. Manamora ny fandefasana koa izany. Ireo mpampiasa dia afaka mitantana ny atiny amin'ny alàlan'ny loharanom-baovao avy amin'ny antoko fahatelo amin'nyInternet.
Raha tsy izany, ny mpampiasa dia afaka manindry ireo teboka telo eo an-tampon'ny ankavanan'ny tranokalan'izy ireo. Izy io dia mitondra ny safidy casting ho an'ny fitaovana Windows 10. Ampiasao ity hizarana mora ny efijeryo amin'ny Chromecast amin'ny solosainao.
Endri-javatra ny Chromecast:
Ny fitaovana Chromecast dia manana tombony tombony ho an'ny mpampiasa azy. Manoro hevitra anao izahay hanandrana anio mba hijinja ireo tombontsoa ireo. Izy io dia mety indrindra ho an'izay maniry fialam-boly manara-penitra amin'ny vidiny mirary. Ireto misy sasany amin'ireo tombony lehibe azo avy amin'ny Chromecast.
1. Mizotra avy amin'ny fampiharana an-jatony
Manohana ara-dalàna ny fampiharana video sy sary Android sy iOS an'arivony ny Chromecast.Izy io koa dia manana fanohanana amin'ny serivisy mivantana mozika malaza Spotify. Na iza na iza dia afaka mampiasa ity fitaovana ity amin'ny vahaolana fialamboly feno ataony. Mifehy tanteraka an'ireo fampiharana ireo ny telefaoninao. Na iza na iza dia afaka mizara ny efijery amin'ny Internet. Ireo mpampiasa dia afaka miato, milalao ary mampitombo ny feony amin'ny alàlan'ny findainy. Azo idirana mora foana izy io. Ny fampiharana fialamboly lehibe rehetra toa ny Netflix, Amazon Prime Video, Youtube dia manohana ny fampisehoana fanariana.
Google dia miasa mankany amin'ny ekosistia ho an'ny fitaovany rehetra. Afaka mampifandray ireo fitaovana Google Home / akany amin'ny Chromecast azy ireo izao.
Izy io dia ahafahanao mijery ny seho tianao indrindra sy ny baikon'ny feo. Afaka manana fizakantena feno ianao amin'ny alàlan'ity fomba ity. Azonao atao ny mifehy tanteraka ny streaming amin'ny alàlan'ity serivisy ity. Io no fampifangaroana fialamboly maoderina tonga lafatra. Amporisihinay ireo mpankafy teknolojia rehetra hampifangaro ireo fitaovana roa ireo.
Vaovao amin'ny tsena ny fitaovana Chromecast. Mpampiasa maro no manandrana ny fampisehoana lalao mahafinaritra misy amin'ny fividianana. Azonao atao ny manandrana lohateny malaza amin'ny alàlan'ny fampiharana fanariana antoko fahatelo. Ny serivisy google stadia dia mahatonga ny lalao ho mora azon'ny rehetra.
Afaka manana traikefa tsara amin'ny filalaovana amin'ny alàlan'ny Chromecast amin'ity famandrihana ity ianao. Ny lohateny mahaleo tena toa ny Just Dance dia efa miasa tsy misy famandrihana fanampiny.
Fitsidihana - https://stadia.google.com/ .
Mamiratra ny ho avy ho an'ireo mpampiasa Chromecast rehetra. Manoro hevitra anao izahay mba hanandrana ny lampihazo anio hahazoana traikefa premium.
Chromecast no fitaovana fandefasana sy streaming mivantana ho an'ny mpamaky maro. Amin'ity toro-lalana ity dia asehonay ny fomba fandefasana atiny avy amin'ny masininao Windows mankany amin'ny TV. Manantena izahay fa hamaly ny fanontanianao rehetra ny mpitari-dalana anay. Azafady mba ampahafantaro anay ny traikefanao amin'ny streaming amin'ny alàlan'ity fitaovana ity. Mirary fotoana mahafinaritra hankafizana fialamboly tsy voafetra amin'ny efijery lehibe anao.
Lalao roblox mampatahotra tsara indrindra 2020 - tsy maintsy lalaovina
Vehivavy malaza indrindra 50 eto amin'izao tontolo izao (lisitra 2020)
code code live xbox indray andro maimaimpoana
www sarimihetsika netflix maimaim-poana com
tranokala mozika tsy voasakana amin'ny sivana an-tsekoly
mijery sarimihetsika feno halavany feno